> Resource > Video > Sida loo Beddelaan MKV in ay Jabbuuti
Maqaalkani waxa uu inta badan soo kordhiyay MKV awood leh oo la isku hallayn karo si Converter Jabbuuti oo kaa caawinaya in aad loogu badalo MKV in ay Jabbuuti oo la tayo sare leh. Jabbuuti oo uu ka mid yahay qaabab doorbido wadaago video on websites ay sabab u tahay baaxadda file yar. Si loogu badalo Jabbuuti ka MKV for web qaybsiga video ama loo maqli karo ciyaaryahanka flash, taas smart aalad waa lagama maarmaan kuu ah.
Waa Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ). Waxay kuu ogolaanaysaa ayaad ugu badalo file MKV in ay Jabbuuti oo video ah ee wadaagga ah ee Shabakadaha ama blogs si fudud. Just socda tallaabooyinka fudud ee hoose, waxaad si deg deg ah u yaqaaniin karaan habka.
1 Load files MKV
Si aad ku shuban file MKV ah, waxaad sidoo kale riixi kartaa ah "Add Files" button ee geeska bidix ee sare si ay u dajiyaan aad file MKV jecel yahay ama si toos ah u jiidin this app ee Murayaad bidix. Haddii aad leedahay dhowr files MKV oo aad rabto inaad iyaga loogu badalo in ay Jabbuuti, aad kula taliyay in ay dajiyaan oo iyaga loogu badalo in Dufcaddii.
2 Dooro sida qaab wax soo saarka Jabbuuti
Tag guddi Qaabka Output dhinaca midig, furo liiska dropdown qaab ama guji image qaabka, ka dibna liiska qaabka wax soo saarka, waxaad dooran kartaa Jabbuuti ka "qaab"> "Web" category.
Fiiro gaar ah: (Ikhtiyaar) Haddii aad u baahan tahay si ay u dejiyaan qaar kale oo xuduudaheedu video sida xal video, heerka jir iyo heerka yara iwm, kaliya riix "Settings" dhinaca hoose ee midigta ah interface ah in ay qiimayaashan gacanta.
3 Start MKV in ay diinta ka Jabbuuti
Press "Beddelaan" button ee geeska gacanta midigta hoose ee MKV si Jabbuuti oo Converter in aan bilowno diinta video ah. App waxay la shaqeysaa aad si hufan. Dhawr daqiiqo ka dib, waxaad heli doontaa ogeysiis leh dhammaan howlaha ay dhammaadeen. Ka dibna, waxaad riixi kartaa "Open Folder" si aad u hesho kuwaas files gediyay Jabbuuti.